Pixelmator Pro ho an'ny Mac indray amin'ny antsasaky ny vidiny ary mampanantena ny hanatsara ny asany cropping | Avy amin'ny mac aho
Angamba ny mpifaninana matanjaka indrindra amin'ny Photoshop amin'izao fotoana izao dia ny Pixelmator Pro. Azontsika atao ny milaza fa milalao ligy iray ihany izy ireo, samy mifanaraka amin'ny M1 ary samy manana motera fanovana mahery vaika. Na dia marina aza fa ilay voalohany dia manana traikefa bebe kokoa ary azo antoka fa tsara kokoa izany, tsy azontsika atao ny manao tsinontsinona ny tombotsoan'ny Pixelmator izay mamela antsika ihany koa ny fandaharan'asany Antsasaky ny vidiny ary filokana amin'ny fanatsarana ny fitaovana cropping malaza.
Indraindray ny mpamorona Pixelmator Pro ho an'ny Mac dia gaga anay amin'ny tombony kely amin'ny fampiasa amin'ny programa na amin'ny vidiny. Amin'ity fotoana ity dia azontsika lazaina izany miresaka roa isika. Manana fihenan'ny vidiny sy fampanantenanay izahay avy amin'ny orinasa izay milaza fa ao anatin'ny fotoana fohy dia hanana fampiasa vaovao izay hanatsara be ny programa izahay.
Tsy ny voalohany fotoana dia manana fihenan'ny vidiny atsinanana isika, toy ny amin'ity indray mitoraka ity. Ka izao raha manapa-kevitra ny hividy ilay programa ianao 21, 99 euro no vidinao, fa tsy ny efa ho 44 fa vidiny matetika.
Saingy tsy maintsy milaza ihany koa isika fa amin'ny andiany manaraka amin'ny programa, 2.1 dia hanana zava-baovao isika eo amin'ny lafiny fitaovan-tsolika ampiasain'ny Machine Learning. Ny fampiasa vaovao dia hamakafaka ny firafitr'ireo sary amin'ny alalàn'ny algorithm amin'ny fianarana milina ary hanome sosokevitra ny amin'ny fomba mety zahao ny sary mba hahasarika ny masony. Ka farafaharatsiny mba hazavaina amin'ny ny bilaoginao.
«Ambonin'ny zavatra rehetra, tadiavinay mahafinaritra ity asa ity", Hoy ireo mpamorona, ary nanampy fa ilay fampiharana" dia manome fomba fijery samihafa amin'ny asa fanovana sary iraisana. " Tsy vaovao amin'ireto masontsivana ireto izy ireo satria ny Pixelmator Pro dia efa misy fampiasa amin'ny milina toy ny Fanapahan-kevitra lehibe, izay manitatra ny sary nefa tsy very fahazavana.
Pixelmator Pro€ 19,99
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Mac App Store » Pixelmator Pro ho an'ny Mac indray amin'ny antsasaky ny vidiny ary mampanantena ny hanatsara ny asany